राजनीति, समाजसेवा र व्यवसायलाई संगसंगै अगाडि बढाउंछु- डा. जितेन्द्र घिमिरे, सभापति, राष्ट्रिय मुक्ती आन्दोलन नेपाल - Yugantar Khabar | News Portal
Posted on January 27, 2022 by Basanta Pariyar
-डा. जितेन्द्र घिमिरे, सभापति, राष्ट्रिय मुक्ती आन्दोलन नेपाल
जितेन्द्र घिमिरे, राष्ट्रिय मुक्ती आन्दोलन नेपालको सभापति हुन । सामाजिक, राजनीतिक र व्यवसायमा सक्रिय उनी प्रखर र स्पष्ट स्वभावका रहेका छन्् । साथै त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि रहेका छन् । उनको जन्म ललितपुर जिल्लामा भएको हो भने हालको बसाई काठमाडौं, नागर्जुन ४ मा रहेको छ । २०३२ मंसिर ८ गतेका दिन बुबा मुक्तीनाथ घिमिरे तथा आमा पवित्रदेवीको कोखबाट उनको जन्म भएको हो । म सानैदेखि शालिन र समाजमा केही गर्नुपर्छ भन्ने सोच थियो । बुबा राजनीतिमा हुनुहुन्थ्यो । पञ्चायती व्यवस्था अन्तर्गत प्रधानपञ्च भएर बुबाले धेरै काम गर्नु भएको थियो । त्यहीबाट छोरा (म) पनि त्यही बाटो हिंड्छन् भनेर समाजका मान्छेले भन्थे । तर पञ्चायत ढल्दासम्म म सानै उमेरको थिएं । यद्यपी म पञ्चायती शासनको विरोधी थिए । जसबाट मेरो बुबा म संग सन्तुष्ट हुनुहन्न थियो । हाम्रो परिवारको आर्थिक सामाजिक अवस्था समग्रमा राम्रो थियो । बुबा पञ्चायती व्यवस्थामा लाग्नु भएको भए पनि प्रगतिशील हुनुहन्थ्यो । हाम्रो आर्थिक, सामाजिक, शिक्षित र राजनीतिक परिवार हो । घरमा छोराछारी सबैलाई पढाउनुपर्छ भन्ने सोच बुबा आमामा थियो । त्यसरी हामी तीन दाजुभाई र तीन दिदी सबै शिक्षित र आ आफ्नो ठाउँबाट देशको सेवा गरिरहनु भएको छ ।
म सुरुमा पढाउने गुरुहरुका प्रभावबाट एमालेमा झुकाव राख्न पुगेछु । तर मदन भण्डारीको निधनसंगै मलाई एमालेमा झुकाव हट्यो । २०५६ सालमा नेपाल प्रहरीमा भिडे । ०६२, ०६३ मा इन्सपेक्टरबाट उपदान लिएर जागिर छोडे । जागिर छाड्नुको मुख्य कारण पारिवारिक दवाव र माओवादी द्धन्दका कारण जागिर छाड्न बाध्य भए । जहाँकी माओवादीहरुले हाम्रो घर समेत जलाईदिएका थिए । जागिर छाडेपछि सामाजिक सेवा र व्यापार संगसंगै अगाडि बढाएं । विभिन्न वृद्ध आश्रम, बालआश्रम लगायत सुकुम्वासी लगायत उहाँहरुको समस्याको समाधानको लागि सधै अग्रपंतीमा रहेर काम गरें । व्यापार अन्तर्गत सेक्युरिटी कम्पनी स्थापना गर्यौं । सुरुमा गणपति र अब्राहम लिंकन हुंदै घिमिरे सेक्युरिटी सर्भिस सेवारत रहेको छ । अर्को उपाध्याय डा«इभिङ स्कुल प्रा. लि. ललितपुर, कुसुन्तीमा सञ्चालनमा रहेको छ ।
त्यो बीचमा मैले राजनीतिको चासो पनि गरि रहें । खुनखार राष्ट्रवादी भनेर चिनिएका पूर्वप्रधानमन्त्री मरिचमान श्रेष्ठलाई पनि भेट्ने अवसर मिल्यो । उहाँ निकै चुरोट खानुपर्ने रहेछ । सेतै कपाल फुलेका जो जिविस पञ्चायतको सभापति समेत हुनु भएका कृष्णबहादुर डंगोलसंगै भटेको हुं । उहाँ अहिले पनि जे जस्तो भएपनि देशमा राजा नै चाहिन्छ भन्ने विचार राख्नुहुन्छ । उहाँ त्यसरी जो डा. बाबुराम भट्टराई एक विज्ञको हिसावबाट म उहाँसंग प्रभावित थिएं । मैले यो देशमा डा. बाबुराम भट्टराई नै कार्यकारी प्रधानमन्त्री एवं राष्ट्रपति बन्नुपर्छ भनेकै दश मिनेटमा उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नु भयो । अचम्मको संयोग परेको छ ।
मैले भन्न खोजेको नयाँ शक्ति जुन परिकल्पना गरेको थिएं, डा. भट्टराई नै अघिसारेपछि म पनि उक्त अभियानमा जोडिएं । तर उहाँ उपेन्द्र यादवको समाजवादी पार्टीमा जाडिईसकेपछि हामी गएनौ । त्यसरी ०७५, ०७६ राष्ट्रिय नमूना पार्टी गठन गर्यौं । नयाँ शक्तिकै अभियान चलाई रहेका आरपी न्यौपाने र हाम्रो पार्टी सहित ०७७ मा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपाल मोर्चाको रुपमा रहने र नयाँ शक्ति पार्टी पार्टीको रुपमा रहने गरि पार्टी एकता गर्यौं । तर एकिकरणमा सहमति भए अनुसार भईरहेको छैन । राष्ट्रिय मुक्ती आन्दोलन नेपाल अघि बढिरहेको अवस्था छ । हामी छलफलकै क्रममा रहेका छौं । हाम्रो पार्टी अहिले निकै मजवुत अवस्थामा रहेको छ । अहिले नै चुनाव हुने हो भने पनि सबै क्षेत्रमा उम्मेदवार दिन सक्छौं । प्रदेश, जिल्ला र पार्टीको सबै जनवर्गीय संण्ठनहरु क्रियाशील रहेका छन् ।
आर्थिक योजना हामीले नेपाल कृृषि प्रधान देश भएको हुनाले कृषिमा आधारित आर्थिक प्रणाली हुनपर्छ भनेका छौं । पञ्चायत तथा राजाकालसम्म पनि नेपाल कृषिमा आत्म निर्भर थियो । त्यो पुरानो कुषि प्रणालीलाई भत्काईएकाले आज अर्बौ व्यापार तथा बजेट घाटा हुनुको साथै परनिर्भर हुनु परेको छ । देश आज राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक र कुटनीतिक इत्यादि रुपमा कमजोर अवस्था रहेको छ । जुन राजनीतिक दर्शन र आर्थिक प्रणाली गलत भएकाले देशको यो अवस्था देखा परेको हो । अब यो देशमा सहि राजनीतिक दर्शन र आर्थिक प्रणाली हाम्रो पार्टीको मात्र हो । त्यसैले हामी निरन्तर जनतामा गईरहेका छौं । जनताले विस्वास गर्ने वातावरण बन्दै गईरहेको छ, बनाईरहेका छौं ।
हामी राजावादी र हिन्दुवादी दुवै होईनौ । हामी देशभक्त र राष्ट्रवादी हौं । हामी सबै खाले राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन चाहन्छांै । त्यसैले हाम्रो पार्टी नाम नै राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपाल राखेका हौं । स्थानीय तहलाई विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्छ । अहिलेको स्थानीय तह जुन अधिकार सम्पन्न रहेको छ, त्यो ठीक छ । हामी केन्द्र सरकार र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्दै आएका छौं ।
अहिलेको राजनीति सन्तोषजनक छैन । नैतिकताको अभाव भएकाले अहिले भांडभैलो देखिएको छ । यत्रो राजनीतिक परिवर्तनबाट देशमा नयाँ राजनीतिक व्यवस्था आएको भनिए पनि वामपन्थी सरकार असफल हुनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले जुन दुई तिहाईको कुरा गरिरहनु भएको छ दिवा सपना मात्र हो । नेपाली राजनीति कमजोर हुनुमा अस्थिर राजनीतिको कारण हो । गणतन्त्रका आफैमा नराम्रो होईन । हामी सधैं गणतन्त्रको पक्षमा रहंन्छौ । अर्को दलिय व्यवस्थाको पक्षमा हामी रहेका छौं । जसले राजनीतिक स्वतन्त्रता दिएको छ । त्यसैले हामी दलिय व्यवस्थालाई मान्छांै । नराम्रो कुराहरुबाट मुक्ति दिलाउने विदेशी हस्तक्ष्ेप अन्त्य गर्ने पार्टीको महत्वपूर्ण योजना रहेको छ ।
समग्र र पूर्ण रुपले विसंगतिहरुको निर्मल पार्ने बाटोमा रहेका छौं । नेपाललाई बाह्य औपनिवेशिक, नवऔपनिवेशिकता, विस्तारवाद, प्रभुत्ववाद, हस्तक्षेप र षड्यन्त्रहरु पूर्ण एवं समग्ररुपमा मुक्ति दिने र दिलाउन राष्ट्रिय स्तरमा मुक्ति आन्दोलन चलाउनुपर्छ भन्ने हो, त्यहि प्रयासमा छौं हामी । यसका लागि हामीले सबै नेपाली जनता, महिला, युवा, मजदुर, सुकुम्वासी र साँस्कृतिक पक्ष सबै मिलेर नेपालको पुनर्जागरण अभियान चलाउदै आएका छौं । हामी निरन्तर धरपकट, जेलनेल भोग्दै आएको छौं । नेपालवाद, नेपालीतन्त्रवाद र नेपाली राष्ट्रवाद मुक्ति हाम्रो राजनीतिक मौलिक दर्शन हो । यसलाई अझ परिमार्जन गर्दै अघि बढ्छौं ।
एमसिसि नेपालको हस्तक्षेपकारी रहेको छ । त्यसैले नेपालको हितमा छैन । हाम्रो देशको सार्वभौमिकता र सम्प्रभुताको हस्तक्षेप गर्छ । एमसिसिको धेरै बुदा मध्ये १४ वटा बुंदा पुरै खारेज हुनुपर्छ । जुन नेपाल हितमा छैन किनकि नेपालको संविधान भन्दामाथि रहेको छ । अर्को एमसिसि आइपीएससंग जोडिएको हुनाले यो सैन्य संरचनासंग सम्वन्धित छ । जसले रसिया, अफगानिस्तान, सिरिया, इराक, लिविया जस्ता देशमा यहि सैन्य संरचनाले द्धन्द्ध जन्माएको हो । हामीले विकल्प सहितको विरोध गरिरहेका छौं । एमसिसि खारेज नै गर्नुपर्छ । नेपालको संविधान भन्दामाथि एमसिसि हुनुभएन । त्यसैले हामीले एमसिसि विरोधी मोर्चा नारायण शर्माको नेतृत्वमा मोहन वैद्य र विप्लव सहितको ६÷७ वटा दलहरु मिलेर विरोध गरिरहेका छौं । हामी शासकीय स्वरुपमा कार्यकारी राष्ट्रपतिय प्रणालीकोे पक्षमा रहंदै आएका छौं । अर्को हाम्रो महत्वपूर्ण पक्ष न्याय संगत समावेशी सहभागिता धर्म संस्कृति, भाषाभाषी, जातजाति, वर्ण, लिङ्ग, पेशा व्यवसाय वर्ग र दुर्गम क्षेत्रको आवाजलाई सम्बोधन गर्दै सबैको अधिकारलाई सुनिस्चित गर्नुपर्दछ । यो नै नेपालको शासन प्रणालीको मेरुदण्ड हो ।